ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးကွက်နှင့် ပက်သက်၍ သိသင့်သည့် အကြောင်းအရင်း
What is World Gold Markert?
ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးကွက်ဆိုတာ ဘာကြီးလည်းဆိုတာကို အရင်ရှင်းမပြခင် သူ့ရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာ forex market ဆိုတာကြီးကို အရင် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးကကော ဘာကြီးလည်းပေါ့။အရင်ဆုံး FOREX ဆိုတဲ့ စလုံးကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။အရှေ့က FOR က foreign ကို ပြောတာဖြစ်ပြီး နောက်က EX ကတော့ exchange လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် နှစ်ခုပေါင်းရင် foreign exchange (နိုင်ငံခြားငွေကြေး ရောင်းဝယ်)တဲ့ စျေးကွက်ကြီးပါ။အဲ့ဒီ့ စျေးကွက်ကြီးဟာဘယ်လောက်တောင် ကြီးသလည်းဆိုရင် American ရဲ့ New York Stock Exchange ဟာ တစ်ရက်မှာ 22.4 Billon အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေချိန်မှာ Forex Market မှာ တစ်ရက်ကို 5.3 Trillion လောက် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်နေပါတယ် ။ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး စတော့ စျေးကွက်ဖြစ်တဲ့ New York Stock Exchange ထက် အဆ ၂၀၀ လောက် ပိုပြီးကြီးမားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခိုင်မာတဲ့ စျေးကွက်တစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။ အဲ့ဒီ forex market ထဲမှာမှ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာငွေကြေးတွေ အပြင် ကျွန်တော့တို့ အခုအရောင်းအဝယ် လုပ်နေတဲ့ Gold လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကမ္ဘာငွေကြေးစျေးကွက် ကမ္ဘာ့ရွှေ စျေးကွက် ကြီးလို့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်
Why Trade World Gold Market ?
ဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးကွက်မှာ အရောင်း၊အဝယ် လုပ်သင့်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တွေများစွာ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီထဲက အချို့ အချက်တွေကို ရွေးထုတ်ပြီး ပြောပြပေးပါမယ်။
ပထမ တစ်ချက်က Leverage (ဆတိုးရောင်းဝယ်မှု) ကြောင့်ပါ။ Leverage ဆိုတာက မိမိထဲမှာ ရှိတဲ့ ငွေပမဏ တစ်ခုထက်ပိုပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်လို့ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။Leverage အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Leverage အချိုးက 1:100 /1:500 1:1000 /1:3000 လောက်ထိ ရှိပါတယ်။(Remark* My Gold Myanmar 1:500)1:100 Leverage နဲ့ ဥပမာ ပေးပါမယ်။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ အရင်းနှီး ၁၀ သိန်းလောက်နဲ့ မြန်မာရွှေစျေးမှာ အရောင်းအဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ၁ ကျပ်သားကျော်ကျော်သာ အရောင်းအဝယ် လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အကျိုးအမြတ်ဟာလည်း တစ်ကျပ်သားရဲ့ အကျိုးမြတ်ကိုသာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။၁၀ ကျပ်သား အကျိုးအမြတ် ကိုလိုချင်ရင်တော့ ၁၀ ကျပ်သားအရင်းအနှီးရှိမှ အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ သို့သော် မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးကွက်မှာ အရောင်းအဝယ် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၁ကျပ်သား အရင်းအနှီးရှိရုံဖြင့် ၁ပိဿာ၏ အကျိုးအမြတ်ကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးကွက်မှာ အရောင်းအဝယ် လုပ်တာ Risk ကြီးကြီးမားမားရှိပြီး အရင်းအနှီး အများအပြားရှိရန် မလိုအပ်ဘူးဆိုတာ အခုပြောပြတဲ့ Leverage ကြောင့်ပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Liquidity ကောင်းတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။Liquidity ဆိုတော ငွေဖြစ်လွယ်မှု မြင့်မားတာ၊ဝယ်ရ၊ရောင်းရ လွယ်ကူတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ.အိမ်၊ခြံ၊ကား စတော့ တွေကို ရောင်းဝယ် မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုတဲ့ အချိန် ချက်ချင်း အရောင်းအဝယ် လုပ်လို့ မရပါဘူး။စျေးတက်နေပေမယ့် ရောင်းချင်သူက ဝယ်မယ့်သူရှိမှ ဝယ်ချင်တဲ့သူက ရောင်းမယ့်သူရှိမှ အရောင်းအဝယ်ဆိုတာဖြစ် မှာပါ။ ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးကွက်မှာကတော့ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ အရေအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိပေါက်စျေးအတိုင်း ချက်ချင်းရောင်းဝယ် လို့ရပါတယ်။ ဝယ်သူ၊ရောင်းသူ လိုက်ရှာနေစရာမလိုဘဲ click တစ်ချက်နဲ့ ဝယ်ရောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ အတွင်း ၂၄ နာရီလုံး ကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ phone (သို့) computer တစ်လုံးနဲ့ internet ရှိယုံဖြင့် စိတ်ကြိုက် ရောင်းဝယ်နိုင်ပါတယ်။
Who Trade World Gold Market ?
ဒီ Market ကြီးမှာ ဘယ်သူတွေပါဝင် သလည်းဆိုရင် World Bank ကြီးတွေ ၊ ကြီးမားတဲ့ စီးပွားရေး Companies တွေ ၊ အစိုးရရဲ့ ဗဟိုဘဏ်ကြီးတွေ ၊ တစ်ခြား ကျွန်တော်တို့လို လက်လီ လက်ကားရောင်း ဝယ်နေသူတွေ အကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေဆိုင်တွေမှာ သွားပြီး လက်စွပ်တွေ ဆွဲကြိုး စတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေ ဝယ်ယူကြတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီ Market ကြီးရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်တောင် ပါမှန်းမသိ ပါဝင် သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လို လက်လီအရောင်းအဝယ် လုပ်သူတွေ (တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အရောင်းအဝယ် လုပ်သူတွေ) ရဲ့ တစ်ရက် ပျမ်းမျှ အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့ ပမာဏကိုက 1.49 Trillion လောက်ရှိပါတယ်။ ဒီ Market ဟာ ဝယ်ရရောင်းရ လွယ်ကူတဲ့ Over-the –Counter(OTC)စနစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။Market တစ်ခုလုံးကို Network စနစ်နဲ့ ချိပ်ဆက်ထားတဲ့ ဘဏ်တွေ အချင်းချင်း လည်ပတ်ပြီး ၂၄ နာရီလုံး အလုပ်လုပ်နေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အလွန် ကျယ်ပြန့်ပြီး ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု မရှိတဲ့စျေးကွက်ကြီးလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီစျေးကွက်ကို ဘယ်သူမှ၊ဘယ် အဖွဲ့အစည်းကမှ ချုပ်ကိုင်လို့ မရတဲ့အတွက်ဒီ market မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စျေးကွက် အတက်အကျတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ရှိတဲ့ Trader တွေရဲ့ ဝယ်လိုအား ၊ ရောင်းလိုအားပေါ်မှာပဲ မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ ဒီ Market ထဲမှာ စိတ်ချယုံကြည်စွာ အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီစျေးကွက်ဟာ ၂၄ နာရီလုံး ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပေမယ့်လို အမြဲတမ်း Active ဖြစ်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။စျေးဟာ အရမ်းလှုပ်ခတ်မှုနည်းပါးတဲ့ အခါမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ စျေးအတက်အကျတွေမှာ ရောင်းဝယ်ကြပြီး အမြတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် စျေးငြိမ် နေချိန်တွေ မှာတော့ အမြတ်ယူဖို့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်အချိန်တွေမှာ စျေးကွက်ဟာ Active ဖြစ်တက် တယ်ဆိုတာ သိထားမှာ မိမိရဲ့ trading time ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။ အရင်ဆုံး Market ဟာ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ဘယ်လို လည်ပတ်နေတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာရဲ့ ၂၄ နာရီကို အပိုင်း ၄ ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။ Syndey Session,Tokyo Session, London Session,NewYork Session တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်း Syndey Session နှင့် Tokyo Session ကို Asia Session လို့သတ်မှတ်ပြီး နေ့လည် London Session ကို Euro Session / ညဘက် Newyork Session ကို US Session ဆိုပြီး ၃ မျိုး သတ်မှတ်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် စျေးကွက် အလှုပ်ခက်များတဲ့ အချိန်တွေက Euro Session နဲ့ US Session တို့ စျေးကွက်ထပ်တဲ့ အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ့ စံတော်ချိန်အားဖြင့်တော့ ည ၇ နာရီနဲ့ ၁၂ နာရီကြား ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။စျေးကွက် နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖွင့်တဲ့ အချိန်တွေဖြစ်တဲ့ အတွက် စျေးကွက်ဟာ ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအား များပြီး active အရမ်းဖြစ်တဲ့ အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါ တယ်။Trader အများစုဟာ ဒီအချိန်မှာ ရောင်းဝယ်ပြီး အကျိုးအမြတ်ရှာကြပါတယ်။ဒါကြောင့် Trading Session Time တွေကိုကြည့်ပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်တာကလည်း အားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်စေ ပါတယ်။
ရွှေ၏ တောက်ပမှု၊ ပုံသွင်းရလွယ်ကူမှု၊ အလွယ်တကူ မပျက်စီးနိုင်မှု စသော ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ရှေးခေတ်ကတည်းကပင် လူသားများသည် ရွှေကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားကြသည်။ ရွှေကိုငွေကြေးအဖြစ် စတင် အသုံးပြုခဲ့ချိန်မှာ ၅၆၀ဘီစီ ခန့် လစ်ဒီယာ(ယခု တူရကီအနောက်ပိုင်း)၏ဘုရင် ခရီးဆပ်စ် လက်ထက်တွင် ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က ခရီးဆပ်စ် ဘုရင်၏ပုံတူကို ရွှေဒင်္ဂါးပေါ်တွင်ရိုက်နှိပ်ပြီး ငွေကြေးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒင်္ဂါးခေတ်မတိုင်ခင်တွင် ကျွဲနွား၊ ကိုကိုးစေ့၊ ပင်လယ်ခရုခွံများ နှင့်တိရိစ္ဆာန်သားရေ စသော ကုန်ပစ္စည်း များကိုသာ ငွေကြေးအဖြစ် လဲလှယ်အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း ရွှေဒင်္ဂါးများသည် အာမခံမှုရှိသောကြောင့် လူအများက တဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာပြီး စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ရွှေသည် အဓိကကျသော နေရာမှပါဝင်လာခဲ့သည်။ ရှေးခေတ်ကယဉ်ကျေးမှုလိုပင် ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း ရွှေ၏တန်ဖိုးနှင့် အလှတရားကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံနေကြတုန်းပင်ဖြစ်သည်။ ရွှေကိုလက်ဝတ်ရတနာအဖြစ် ဆင်မြန်းကြသည်။ ထို့အပြင် ရွှေကိုဒင်္ဂါးပုံစံ (သို့) ရွှေချောင်းပုံစံအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စုဆောင်းမှုများလုပ်ကြပြီး အခြားနေရာများတွင်လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။
ရွှေမှာ အလွန်ရှားပါးသည်။ နှစ်စဉ်တူးဖော်ရရှိသော ရွှေပမာဏမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင်စုစုပေါင်း ရှိသော ရွှေပမာဏ၏ ၂%သာ ရှိသည်။ နှစ်စဉ်တူးဖော်ရရှိသော ရွှေ၏ လေးပုံသုံးပုံမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရွှေထုတ်လုပ်မှု အများဆုံး နိုင်ငံ (၁၀)နိုင်ငံမှ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ရွှေထုတ်လုပ်မှုအများဆုံး နိုင်ငံ (၁၀)နိုင်ငံမှာ- ၁။ တရုတ် ၂။ သြစတေးရီးယား ၃။ ရုရှား ၄။ အမေရိကန် ၅။ ကနေဒါ ၆။ တောင်အာဖရိက ၇။ ပီရူး ၈။ အူစ်ဘက်ကစ်စတန် ၉။ မက်ဆီကို ၁၀။ ဂါနား တို့ဖြစ်သည်။ Reference: Top 14 Gold Producing Countries in The World ထိုကဲ့သို့ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုများမှ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏမှာ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန်ပေါင်း ၃,၀၀၀ခန့် (၉၆၄၅၀၀၀၀ထရိုင်အောင်စနှင့် ညီမျှသည်)ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးအရဆိုလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၀ဘီလီယံခန့် ရှိသည်။ ရွှေကို နှစ်စဉ် ရရှိနိုင်သော ပုံစံ(၄)မျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ- ၁။ အသစ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၂။ လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများမှပြန်လည်ပုံသွင်းရယူခြင်း ၃။ အသိအမှတ်ပြုရွှေဆိုင်၊ ဗဟိုဘဏ်တို့မှ ရောင်းချပေးခြင်း ၄။ ဗဟိုဘဏ်ကဲ့သို့သော တရားဝင်ရွှေထိန်းသိမ်းသည့်နေရာများမှ ရွှေကိုချေးငှား၊ ချေးယူနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ရွှေကိုဝယ်လိုအားများသော အဓိကအရင်းအမြစ်နေရာကြီး (၃)ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ- ၁။ လက်ဝတ်ရတနာထုတ်လုပ်ရောင်းချသောလုပ်ငန်းများ ၂။ စက်မှုလုပ်ငန်းများ ၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဝယ်လိုအားအကြီးမားဆုံးနေရာမှာ လက်ဝတ်ရတနာထုတ်လုပ် ရောင်းချသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ ရွှေ၏ ပုံသွင်းရလွယ်ကူမှု၊ သူမတူသောလှပမှု၊ လူတိုင်းနှစ်သက်သဘောကျမှု များကြောင့် ရှားပါးပြီး တန်ဖိုးကြီးသော ရွှေသည်လက်ဝတ်ရတနာများအားလုံးထဲတွင်နှစ်သက်ခြင်းအခံရဆုံးဖြစ်သည်။ ရွှေကိုလက်ဝတ်ရတနာအဖြစ်အသုံးပြုသည့်အပြင် လေယာဉ်၊အာကာသယာဉ် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သွားဖက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစသည့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လည်း အသုံးပြုသည်။ စျေးကွက်အခြေအနေများပေါ်တွင်မူတည်၍ရွှေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊စျေးကစားသူများ၏ဝယ်လိုအားမှာလည်း နှစ်အလိုက်ပြောင်းလဲမှုများ အများအပြားရှိသည်။ ရွှေစျေးရွှေစျေးကွက်သည် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများသောကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Trading Center များ ဖြစ်သော နယူးယောက်၊ လန်ဒန်၊ ဇူးရစ်ခ်၊ တိုကျို နှင့် ဟောင်ကောင်တို့မှ ရွှေစျေးကွက်ကို တစ်နေ့လျှင် ၂၄နာရီ လုံးလုံး အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးထားသည်။ စျေးကွက်တွင်ပြုလုပ်သည့် အရောင်းအဝယ်များကိုမူ ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံးရွှေပိုင်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံ(၅)နိုင်ငံမှအဓိကပါဝင်စျေးကစားကြသည်။ ရွှေစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုများကို စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ၊ ငွေစုစာချုပ်များ၊ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ၏ စျေးနှုန်းများနှင့်အတူ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနာမည်ကြီးသတင်းစာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထားသည်။
ရွှေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသောအကြောင်းရင်းများမှာ သမိုင်းကြောင်းတလျှောက်တွင်မပြောင်းလဲပဲ ရှိနေသည်။ ၎င်းတို့မှာ- ၁။ ကာလကြာမြင့်စွာ တန်ဖိုးမပြောင်းလဲပဲ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း ၂။ ငွေကြေးအကြပ်အတည်းကြုံချိန်တွင်ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခြင်း ၃။ ငွေပေါ်လွယ်ခြင်း ၄။ ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၁။ အမေရိကန် (၈၁၃၃.၅တန်)
၂။ ဂျာမနီ (၃၃၈၁တန်)
၃။ အီတလီ (၂၄၅၁.၈တန်)
၄။ ပြင်သစ် (၂၄၃၅.၇တန်)
၅။ တရုတ် (၁၇၉၇.၅တန်)
၆။ ရုရှား (၁၄၆၀.၄တန်)
၇။ ဆွစ်ဇီလန် (၁၀၄၀တန်)
၈။ ဂျပန် (၇၆၅.၂တန်)
၉။ နယ်သာလန် (၆၁၂.၅တန်)
၁၀။ အိန္ဒိယ (၅၅၇.၇တန်) Reference: Top 10 Countries with the Largest Gold Reserves Forbes Magazine (May 26, 2016)
ရွှေစျေးကွက်ကို နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Trading Center များမှ ၂၄နာရီ လုံးလုံး အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင် ရန်ဆောင်ရွက်ပေးထားသည်ဖြစ်သော်လည်း အာရှအချိန်များတွင် ရွှေစျေးလှုပ်ခတ်မှု နည်းတတ်သည်။ အဓိက Trading Center ကြီးတစ်ခုဖြစ်သော လန်ဒန်အချိန်တွင်မူ ရွှေစျေးလှုပ်ခတ်မှု ပိုများလာတတ်ပြီး ရွှေပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံးဖြစ်သော အမေရိကန်အချိန်တွင်မူ ရွှေစျေး လှုပ်ခတ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ဒီ Market ရဲ့ အကြောင်းကို အနည်းငယ်တော့ သဘောပေါက်လောက်ပြီလို ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
အားလုံးပဲ အရောင်းအဝယ် ကံကောင်းကြပါစေ
အတိုးနှုန်း (သို့မဟုတ်) ငွေကြေးဈေးကွက် လက်နက်တစ်ခု